IMT Vislink ကို CABSAT 2019 တွင် Low Latency နှင့် 4K လတ်တလောအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တင်ပြရန် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IMT Vislink ကို CABSAT 2019 တွင် Low Latency နှင့် 4K ရှိနောက်ဆုံးခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုတင်ပြသွားပါမည်
ဒူဘိုင်း, ဖေဖော်ဝါရီ 28, 2019 - IMT Vislink လာမည့် CABSAT 2019 event မှာနှစ်ခုနည်းပညာဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ hosting ပါလိမ့်မည်။ အတူပူးပေါင်းတင်ဆက် အဆင့်မြင့်မီဒီယာ, ဒါဝိဒ် Edwards က, IMT Vislink ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာအားဖြင့်ကယ်လွှတ်ခြင်း, အစည်းအဝေးများအောင်းနေချိန်နှင့် 4K အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီနှစျခုနှီးနှောဖလှယ်ပွဲပြပွဲ၏နေ့ရက်တိုင်းသောအရပ်ယူတော်မူမည် 12 ကနေမတ်လ 13 နှင့်မတ်လ 2: ခန်းမ 30 အတွက် 4PM မှ 4PM ။ IMT Vislink ရဲ့ HCAM 4K ကြိုးမဲ့ကင်မရာစနစ်ကိုလည်းမှာ featured ပါလိမ့်မည် အနာဂတ်အနုပညာအသံလွှင့်ထရေးဒင်း (F3-3 ရပ်ခန်းမ 10) ရပ်တယ်။
"ကျွန်မဒီနှစ် CABSAT ပြပွဲတစ်ခုတွင်ဟောပြောရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့ဂုဏျဖြစ်၏," Edwards ကပြောလိုက်ပါတယ်။ "ဒီနှစ်ခုမှာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲငါ့ကိုအောင်းနေချိန်နှင့် 4K အပါအဝင်ကြိုးမဲ့ကဗီဒီယိုနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းပေါ်မှာမထိခွင့်စှာကွဲပြားခြားနားကြလိမ့်မည်။ ငါကအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များနှင့်အတူဤဒေသများ၌ငါ့အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာမျှဝေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။ "
အချိန် Matters - အနိမျ့ latency ၏တနျဖိုး
နေ့ 1 - မတ်လ 12, 2: 30PM - ခန်းမ4အတွက် 4PM, ညီလာခံကအခန်း
ဤသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးစဉ်အတွင်းကဗီဒီယိုရှုပ်ထွေးမှုနှငျ့ဆအဖြစ်, Edwards ကအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဂီယာအထောက်အကူပြုသောအချက်များသို့ငုပ်မည်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် HD, 4K UHD, MPEG-4 နှင့်ပိုပြီး။ ဤရွေ့ကားကိစ္စများဂိမ်းကစားဝေဖန်အရေးယူမှုမျှမ cutout နှင့်အတူတင်ပြရပါမည်အဘယ်အရပ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအားကစားအတွက်အများဆုံးပျံ့နှံ့နေသည်။ မိမိအတင်ဆက်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Edwards ကစျေးကွက်အပေါ်ကိုအခြားဖြေရှင်းချက်မှနှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ 4K UHD resolution နဲ့ Single-frame ကိုအောင်းနေချိန်နှင့်အတူ IMT Vislink HCAM နှင့် UltraReceiver နည်းပညာ၏အကျိုးကျေးဇူးများတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
High Dynamic Range နှင့်အတူ 4K ကြိုးမဲ့ Delivery
နေ့2- မတ်လ 13, 2: 30PM - ခန်းမ4အတွက် 4PM, ညီလာခံကအခန်း
ဒီတင်ပြချက်အဘို့, Edwards က 4K UHD ၏ကျယ်ပြန့်လက်ခံမှုကိုဖြည့်ဆည်းပြီးမြောက်ဖို့ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်လိုအပ်သောအချက်များမှာကြည့်ရှုသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲနိုင်ရန်မှာအပြစ်တွေပိုပြီးစွဲငြိဖွယ်ရာမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့လိုပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သာပိုကြီးတဲ့ Screen ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တီဗီပိုမိုနီးကပ်စွာထိုင်လျက်အသုံးပြုပုံဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှီနိုင်သူစားသုံးသူများဆုံးရှုံးအန္တာရာယ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ session စဉ်အတွင်း Edwards ကထိထိရောက်ရောက်ပိုပြီးအထင်ကြီးပုံတစ်ပုံကိုတင်ပြရာတောက်ပနှင့်ဆနျ့ကငျြဘယ့်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, မှီရန် IMT Vislink HDR နည်းပညာအကောင်အထည်ဖော်၏အားသာချက်များကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Edwards က '' တင်ပြချက်များအပြင်, IMT Vislink ဂီယာပြပွဲကြမ်းပြင်တစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောတစ်ခွင်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပါလိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့်မီဒီယာရဲ့ရပ်တည်မှု (ခန်းမ 4, Booth A3-3) နှင့်ထွန်း MSAT (ခန်းမ 10, Booth D6-6) ရပ်ဟာ SpacePath မှာမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည်မှာကုမ္ပဏီ၏ HCAM 24K UHD ကြိုးမဲ့ဗီဒီယို transmitter ပြသပါလိမ့်မည်။
IMT Vislink ရဲ့ HCAM 4K ကြိုးမဲ့ဗီဒီယို transmitter အားကစား, အသံလွှင့်ပွဲနှင့်အခန်းအနားလွှမ်းခြုံအပါအဝင် applications များတဲ့အရေအတွက်ချောမွေ့စွာ 4K ဂီယာစွမ်းရည်ပေးထားပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်း 4K UHD programming ကိုဦးတည်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အတိုင်း HCAM ယုံကြည်စိတ်ချရသော HEVC ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အလွန်အမင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, Configure လုပ်လို့ရတဲ့ mounting options များနှင့်အတူ, HCAM prosumer, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ENG ကင်မရာများနှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။ အဆိုပါယူနစ်ကို iOS နှင့် Android apps များနှင့်အတူတွဲဖက်သုံး Wi-Fi နှင့် Bluetooth ကိုထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်နှင့်ဖြစ်ရပ်အော်ပရေတာကလက်ရှိနှင့်အနာဂတ်နည်းပညာတွေကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသေချာ။
အဆိုပါ ထွန်း MSAT အလွန်ခရီးဆောင်ပေါ့ပါး, tri-band ဖြစ်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု အဖြစ်အနည်းငယ်သာငါးခုအဖြစ်မိနစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ Non-လုံခြုံဒေတာနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်ပေးဘယ်နေရာမှာမဆိုဖွင့်လှစ်နိုင် terminal ကို။ ဒါဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလွှမ်းခြုံသေချာအမြဲရရှိနိုင်ပါသည် X-, Ku- နှင့် Ka-band configurations ထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ဦး 65-, 90- သို့မဟုတ် 120-စင်တီမီတာရောင်ပြန်နှင့်အတူရရှိနိုင်သော, စနစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက် enviroments မှာလျင်မြန်စွာဖြန့်ကျက်ဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်နှင့်အဓိကပါဝါသို့မဟုတ်ဘက်ထရီစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။
ဒီပစ္စည်းကိရိယာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, သို့မဟုတ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်, အီးမေးလ် [အီးမေးလျ protected].
Vislink Technologies ကအမှတ်တံဆိပ်အဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဆက်သွယ်ရေးဖြေရှင်းချက်၏ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ကျက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။ သူတို့ကထုတ်လွှင့် / အားကစား / ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေး public / ဘေးကင်းလုံခြုံမှု / ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်များတွင်ဆင့်-1 ဖောက်သည်ပေးသွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး, တိုးချဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပ္ပံနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံစံအချက်များတည်ဆောက်, စွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်မားမှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ယင်းအသံလွှင့်, အားကစားနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍများ, IMT နဲ့ Vislink အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်ဗီဒီယိုဖိုင်, ဖမ်းယူထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန် high-definition ဆက်သွယ်ရေးလင့်များသည်။ အဆိုပါဥပဒေ, အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှု & ကာကွယ်ရေးစျေးကွက်မှာတော့ IMT နဲ့ Vislink လုံခြုံသောဗီဒီယိုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေသခံအမျိုးသားရေးနှင့်နိုင်ငံတကာအေဂျင်စီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှမစ်ရှင်-ဝေဖန်ဖြေရှင်းချက်ပေးသညျ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.imt-solutions.com နှင့် www.vislink.com.
Hackettstown, နယူးဂျာစီရုံးချုပ် Vislink Technologies က 70 မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆိုင်းငံ့မူပိုင် applications များကျော်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုလူသိရှင်ကြားကုန်သွယ်နှင့် NASDAQ Capital ကိုစျေးကွက်အပေါ်စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် www.vislinktechnologies.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor IMT Vislink isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-02-28
နောက်တစ်ခု: Cablecast အဝန်းမီဒီယာပလက်ဖောင်း Simplified Workflows နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဝန်ထမ်း MVCC မှာသာမန်လုပ်ငန်းများအနေဖြင့်